トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Imininingwane pachinko Ngempumelelo eqoqwe usebenzisa P-WORLD
Kungcono ukuba pachinko kuyinto, ngicabanga eziningi kubantu usebenzisa p-jikelele. Indawo, ngakho umuntu ingabonwa kalula, kuba baqoqe isibe indawo esisemqoka.
Esikhathini p bomhlaba, ukuthi yebo ulwazi of pachinko emakhazeni ulwazi kanye onobuhle zakamuva kulo lonke izwe, umkhakha Imininingwane and Xintai nokususwa etafuleni amazinga, njll, ziza Imininingwane ezihlukahlukene posted. Ngakho-ke p-izwe kuyinto amasayithi owaziwa ngokuthi futhi ihlola izikhulu pachinko umkhakha, pachinko eshintsha eziye bhalisiwe kule sayithi, ngicabanga ukuthi kukhona mayelana 80%.
futhi lonke abadumile, lokhu pa o Imininingwane indawo, sifuna ukubheka kanjani sisebenzise. p-izwe, ngisho ngaphandle kokuya sasemakhazeni pachinko, izitolo izenzakalo and Xintai ulwazi noma, imodeli ukufakwa, njll, it kalula ukuqoqa wonke ulwazi evela eshintsha pachinko.
Ikakhulukazi, simo etafuleni ukususwa and Xintai, ngoba imininingwane ayitholakalanga kwezinye, Xintai, ezifana ukuthandwa amasheke futhi ikwazi ukuqoqa ulwazi kusengaphambili. Ngaphezu kwalokho, imboni ilwazi futhi ulwazi p bomhlaba esiyingqayizivele.
lapho umenzi yiphi ikhompyutha onobuhle, njengokuthi noma ngabe i novivinyo, ngokuqoqa ulwazi ekuqaleni, ungase futhi wabikezela isikhathi isingeniso Xintai. Futhi imodeli ulwazi p bomhlaba liwukuthi kuze etafuleni esetshenziswa kusukela model yakamuva, kungenzeka ukucinga iyiphi imodeli, ngoba kubuye kuhlotshaniswe iwebhusayithi yomenzi, ungakwazi kalula ukuqoqa ulwazi imodeli olunemininingwane ethe xaxa.
esinjalo, kuba kahle ukubuka ukuthi ulwazi olukhethekile kwenye indawo kule mboni, ungakwazi ukuqoqa ukwaziswa okwengeziwe okulokhu.
, futhi okuhle kunakho ukusizakala kule sayithi, ngicabanga ukuthi-ke lesi isikhathi sokuba empeleni ahambe ukudlala. Uma uya hit Slingshot, kumele ube esitolo sokuqala ukukhetha. Ngaleso sikhathi, kuba ewusizo kakhulu pachinko emakhazeni kolwazi ezweni lonke. Uma usunqume esifundeni lapho mina ngizoya
, bheka lokuqala Indawo ufuna imodeli ulwazi, efakwe kanye nemicimbi. Ngokuhlola imodeli ukufakwa, yiphi ikhompyutha amamodeli we ezikhangiso onobuhle, kungakhathaliseki ukuthi ufake amandla nganoma iyiphi specs bheka Matasupekku, futhi, kusukela Ukucaciswa imodeli ukufakwa, akukho pachinko Been ngisho esitolo, ungakwazi pachinko emakhazeni izinga wokuhlengwa Kubikezelwa ukuthi ngezinga elithile.
futhi ulwazi lomcimbi uzoqhubeka uhlole futhi ukushisa imodeli umcimbi kanye nemicimbi. Eqinisweni iyiphi degree nail ukulungiswa, yilokhu uhlobo isimo, Angimazi ukuya sasemakhazeni pachinko ngempela kodwa, ngokuya ukuqoqa ubuncane ulwazi, imodeli abakhethiwe iba bushelelezi, nokulahlekelwa isikhathi akudingeki ukuba ube.
ukuguqulwa ratio ngu ongabikezela, ngokuvumelana bebodwa kanjani ukudlala hhayi kuphela uhlobo lomcimbi, sihlose uzokwazi futhi kumelwe lihlukaniswe ngaphambi imodeli. Ngale ndlela, akukho imfucuza kanye ukusebenzisa kahle ulwazi p bomhlaba, ungafuna futhi azame ukuthumela ukuphila pachinko.